Mmadụ na-echekwa na corona ugboro
15000 ndị a zoputara na nzukọ online.
Ma n'ihi ndị coronavirus ike-anakọtara ke mbụ ụzọ. Kama nke ahụ, nzukọ na Internet.
Nkịtị izu ụka 1000 zọpụta
Gụọ na Sverigebönens ala na Craig Groeschels ụka Life.Church na United States, ọ bụ ejikari banyere 35,000 ndị mmadụ na-aga ọmụmụ ngwụsị izu ọ bụla.
Mgbe ahụ na-emekarị-abụ ihe 1000 ndị azọpụta.
Internet Ọmụmụ ruru Corona: 15,000 zọpụta
Ma n'ihi ndị coronavirus ike-anakọtara otú a. Kama nke ahụ, nzukọ na Internet.
Ugbu a n'otu chọọchị nzukọ n'oge izu ụka 195.000 na-eso ụzọ na 15,000 natara Jizọs na ọkọdọ zọpụta!